बेलुन र दृष्टिकोण - Safal Stories
Home Short Stories बेलुन र दृष्टिकोण
सामान्यस्तरको एकजना व्यापारी, हाटहरुमा डुल्दै, बेलुन बेचेर जीविका चलाउँथ्यो । ऊसंग राता, पहेंला, नीला र काला सहित अनेकौं रङका बेलुनहरु थिए । ती खुब बिक्थे, भीड कम भएपछी भने बिक्रि घट्नु स्वभाविक थियो । बिक्रि घट्दा व्यापारीले हिलियम ग्याँसले भरिएको एउटा बेलुन हावामा छोडीदिन्थ्यो। रंगिन बेलुनहरु उडेको देखेपछि बालबालिकाहरुको कुदाकुद हुन्थ्यो । उनीहरु त्यहीं झुम्मिन आइपुग्थे र बिक्रि फेरी बढ्थ्यो ।
व्यस्त भैरहेको एकदिन व्यापारीले आफूलाई कसैले कोट्याएको महसुस गर्यो । फर्किएर हेर्यो, कोट्याउने एउटा सानो बच्चा रहेछ । बेलुनतिर देखाउँदै बच्चाले सोध्यो,” त्यो कालो रङको बेलुन पनि उड्छ ?” साधारण र सजिलो सुनिए पनि प्रश्न गहिरो अनि मार्मिक थियो । बच्चाको प्रश्नले व्यापारीको मन छोयो । स्नेहपूर्वक उत्तर दिंदै उसले भन्यो, “बाबु, बेलुन रङले उड्ने होइन । बेलुन त हावाले गर्दा उड्छ। बेलुनको भित्र हलुका खाले हावा भरिएको हुन्छ। त्यही हावाले नै कालो र अरु सबै रङका बेलुनलाई उडाउँछ” ।
हाम्रो जीवनमा पनि यहि सिद्धान्त लागू हुन्छ । बेलुनको हलुका हावा जस्तै हामीलाई प्रेरित गर्ने वस्तु भित्र छ कि छैन ? हाम्रो भित्रि भागमा के भरिएर बसेको छ ? त्यो भरिएर बसेको चाहिं हाम्रो लागि महत्वको वस्तु हो । त्यस वस्तुलाई हामी सोंच अर्थात् दृष्टिकोण भन्छौं । त्यही दृष्टिकोणले नै हामीलाई पनि माथिमाथि उडाउँछ।
साभार : You Can Win, शिव खेडा , पेज नं २
Previousजन्मदिनमा आफैंलाई उपहार दिनुहोस्
Nextकविता : ‘आँखालाई सपना देख्न देऊ’